Ngwọta na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-eme ka mmiri ghara ịdị na-agwọ ọrịa, na-adaba adaba
Home / ngwa / Nkọwa na-aga n'ihu / Itinye n'ọkwa Preheating
Category: Nkọwa na-aga n'ihu Tags: nkwalite mgbakwunye mbido, igwe ikpo ọkụ na-emepụta ihe, ntinye usoro ịgbado ọkụ preheat, igwe onu ahia ndi mmadu, induction preheating ọgwụgwọ, ịgbado ọkụ preheating induction, nnyeghari ọkụ ọkụ, preheating ịgbado ọkụ induction, preheating igwe ịgbado ọkụ, PWHT
Kedu ihe ị ga-eji mee ka ịmalite ịmalite ịmalite?
Mgba aghara na-egbuke egbuke bụ usoro ihe eji eme ihe ma ọ bụ ihe eji eme ihe site na ntinye tupu nhazi ọzọ. Ihe mere eji kpochapu ọkụ. Na cable na waya ụlọ ọrụ, eriri cores na-pre-ewe iwe tupu mkpuchi extrusion. Akpụkpọ ụkwụ ndị a na-ekpo ọkụ tupu ha ekpochapu ya na zinc. Mgba aghara na-egbuke egbuke na-eme ka ọla dị nro dị mfe tupu ị hulata, na-akwadebe tubes na ọkpọkọ maka ịgbado ọkụ. Ihe ngwọta maka ntinye aka na mgbochi nhazi mmezi nke mgbakọ.
DAWEI Ngwunye usoro mmeghe dị nnọọ mma, na-akpata nnukwu nchekwa nchekwa. Mgbe ị na-ekpochapu ígwè na eriri na waya, ndị na-ahụzi diode na-eme ka ihe dị ike nke 0.95 na-eme, mgbe niile, na-ewepụ ụgwọ ọrụ ike. Oge okirikiri dị mkpụmkpụ, kwa. Ịga n'ihu na-arụ ọrụ na-akpaghị aka na-egosi na otu akpa nwere ike ijikwa ọkwa dị iche iche. Ngwongwo na-ekpo ọkụ na-egbuke egbuke bụ kọmpat ma dị mfe itinye ọnụ n'ime usoro mmepụta.
Mgba aghara na-egbuke egbuke a na-arụ ọrụ na akụrụngwa, ígwè ọrụ, nchekwa ụgbọ elu, nkà mmụta sayensị, ngwaahịa ọcha na ọrụ ụgbọ mmiri. Uzo ozo eji eme ihe bu ihe omuma maka ikpochapu. Usoro MOD anyị na-eme ka usoro ikuku ọkụ na-eme ka mmiri dị jụụ na-ejiri mee ihe na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ maka ikpo ọkụ welite na ntanetị. Usoro MYD usoro ikuku oku na-ekpo ọkụ na-abanyekarị na nyiwe mmanụ na ọdụ ụgbọelu iji rụọ nrụzi na mmezi.
Kedu ihe ọrụ dị?
A na-eji isi usoro windo MYD akpọrọ ihe ọkụkụ na-eme ka ọ bụrụ isi na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ usoro.
Igwe ntanetị ọkụ na-ekpo ọkụ na-ebugharị ọkụ ọkụ
Post weld ngwaọrụ ọgwụ ọkụ | PWHT Equipment